हवाई दुर्घटनाबाट बचाउने दायित्व कसको ? - रामकुमार परियार
My personal openion
Home / अनुभुती / हवाई दुर्घटनाबाट बचाउने दायित्व कसको ?
हवाई दुर्घटनाबाट बचाउने दायित्व कसको ?
रामकुमार परियार Friday, February 26, 2016 0
तारा एयरको विमान दुर्घटना भएर २ जना विदेशी सहित २३ यात्रुको मृत्यु भएको २ दिनमै आज काष्ठमण्डप एयरको जहाज दुर्घटना भयो । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार यो दुर्घटनामा पाईलट र को-पाईलटको मृत्यु भएको र ९ यात्रु घाईते भएको बुझिएको छ , यद्यपि यो आधिकारिक भने होईन ।
यसरी २ दिनको अन्तरमै हवाई दुर्घटना हुनु भनेको ठूलो चुनौती हो । यसले यात्रुलाई हवाई यात्राबाट त्रसित बनाउनुका साथसाथै मुलुकको विकासमा नै व्यवधान सिर्जना गरेको छ । हरेक देशमा यस्ता घटना विरलै हुने गर्छ , नेपालमा समेत वर्ष , दुईवर्षको अन्तरालमा एउटा हवाई दुर्घटना हुँदै आएको थियो । तर यसरी लगातार हुनु भनेको गम्भीर र सोचनिय कुरा हो ।
निजि एयरलाइन्सहरुलाई जथाभावी लाईसेन्स वितरण गरेर नियमिय अनुगमन र निरिक्षण नगर्दाको परिणाम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । एयरलाइन्सले कस्तो जहाज ल्याउँदैछन , कसरी संचालन गर्दैछन , कसले उडाउँदै छन , ईन्जिनको नियमित निरिक्षण र मर्मतसंभार भईरहेको छ कि छैन , जहाज भित्र आकास्मिक सुरक्षा र उद्दारको कस्तो व्यवस्था छ , यात्रुलाई के कस्तो सुविधा दिंदैछन आदि विषयहरुको अनुगमन गर्ने दायित्व कसको ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
हुन त नेपालको मौसम हवाई दुर्घटनाको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको नकार्न सकिन्न । यहाँको हवाई यात्रा वास्तवमै चुनौतिपुर्ण छ । तर यो भन्दा असुरक्षित मानिएका देशहरुमा समेत जहाज उडेकै छन । तर किन दुर्घटनाका खबर त्यत्ती सुन्नु पर्दौन ? सोच्नैपर्ने हुन्छ । अन्य दुर्घटनाको तुलनामा हवाई दुर्घटनालाई निकै संवेदनशील रुपमा लिईने गरिन्छ । किनभने हवाई दुर्घटना भएको खण्डमा यात्रु जिवित हुने संभावना शून्य प्रायः रहन्छ । यो जान्दाजान्दै पनि हवाई सुरक्षा प्रती संवेदनशील नहुनु भनेको खेदजन्य कुरा हो ।
यदि नेपालमा यसैगरी हवाई दुर्घटनाको संख्यात्मक वृद्धि हुने हो भने पर्यटन व्यवसाय चुर्लुम्म हुने कुरामा दुईमत छैन । न त आन्तरिक पर्यटक नै घुम्न निस्कन्छन् । पर्यटन व्यवसाय नै ठप्प हुनु भनेको यहाँका एयरलाइन्सहरु नै बन्द हुनु हो । यो जान्दाजान्दै पनि गरिन्छ लापारबाह ? सरकार र संबन्धित निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ । (फाल्गुन १४ , शुक्रवार )
" मेरो झण्डा , मेरो गौरव "
पोखरामा धारो छोएको निहुँमा दलित महिला पिटिईन,प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मानेन
ठगहरु देखि सावधान हुनुहोला - भोगाई
"तँ कमिनीले पाउँदिनस् राहत” भन्दै निर्घात कुटपिट
अन्तरजातीय बिहेका कारण परिवारै गाउँनिकाला
Tweets by @RamKumarPariyar
आफ्नै कुरा (4)
Blog Archive March 2018 (1) November 2017 (1) June 2017 (2) April 2017 (2) March 2017 (1) September 2016 (1) July 2016 (3) June 2016 (2) April 2016 (4) March 2016 (3) February 2016 (7) January 2016 (5) December 2015 (5) November 2015 (4) October 2015 (6) September 2015 (19) August 2015 (5) July 2015 (14) June 2015 (16) May 2015 (23) April 2015 (46) March 2015 (20) February 2015 (11) January 2015 (99)
अनुभुती (39) आफ्नै कुरा (4) गाउँघर (3) जानकारी (18) तस्बिर (14) प्रविधि (23) भिडियो (4) मनोरंजन (12) रमाइलो (4) रोचक (9) लेख (8) विविध (11) समसामयिक (14) समाचार (103) साभार (11) साहित्य (13) स्वास्थ (13)
© Ram Kumar Pariyar. | ⓓ Design - Krishna Pyasi.